Raw Alpha GPC Powder (28319-77-9) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker Chemical
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (၂၈၃၁-၇၇-၉)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2018
alpha-GPC (L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate) သည်သဘာဝဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်: 1460kg / လ
ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9)
L-Alpha glycerylphosphorylcholine (alpha-GPC, choline alfoscerate) ဟာ ဦး နှောက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့သဘာဝ choline ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည် parasympathomimetic acetylcholine ရှေ့ပြေးရောဂါလည်းဖြစ်ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုများကိုကုသရန်အလားအလာရှိနိုင်သည်။
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့်သည်သွေးနှင့် ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ပြီး ဦး နှောက်ထဲသို့ကိုလင်းကိုလျင်မြန်စွာပို့ဆောင်ပေးပြီး acetylcholine ၏ biosynthetic precursor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအများစုတွင်ဆေးညွှန်းမပါသောဆေးဖြစ်သည်။
ဥရောပမှာတော့ alpha-GPC အယ်လ်ဇိုင်းမား s ကိုရောဂါကုသမှုများအတွက်ဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ alpha-GPC အများစု memory.Other alpha-GPC များအတွက်အသုံးပြုသည်တိုးတက်လာဖို့ရာထူးတိုးထုတ်ကုန်များတွင်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်သာရရှိနိုင်သည်စိတ်ဖောက်ပြန်, လေဖြတ်ခြင်း, နှင့် "အသေးစားလေဖြတ်ခြင်း" (ယာယီ ischemic တိုက်ခိုက်မှု, TIA အမျိုးမျိုးကုသပါဝင်သည် ) ။
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့်
ဓာတုအမည် Choline Alfoscerate; alpha GPC; L-အာလဖ glycerylphosphorylcholine; Choline glycerophosphate
အမှတ်တံဆိပ် NAmE မရှိနိုင်ပါနေ့စွဲ
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား parasympathomimetic acetylcholine
CAS အရေအတွက် 28319-77-9
InChIKey SUHOQUVVVLNYQR-QMMMGPOBSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C8H20NO6P
မော်လီကျူး Wရှစ် 257.223 g / mol
အရည်ပျော် Point 142.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အေး။ ခဲသော အမှတ် မရှိနိုင်ပါနေ့စွဲ
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ အဆိုပါအာလဖ GPC ဝက်ဘဝ 4-6 နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်စားသုံးမိ၏ 1-2 နာရီအတွင်းအထွတ်အထိပ်ဟု
Solubility DMSO အတွက်ပျော်ဝင်
Storage Temperature ၀ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ (ရက်သတ္တပတ်များမှရက်သတ္တပတ်များ) သို့မဟုတ်ရေရှည်တွင် -0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (လများ) ။
Application Choline Alfoscerate ကို Alzheimer Disease ရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) ဖော်ပြချက်
Alpha GPC သည် L-Alpha glycerylphosphorylcholine ၏ဘုံအမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသဘာဝအားဖြင့်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်သည်။ Alpha GPC အမှုန့်သည်သိပ္ပံကိုမြှင့်တင်ပေးသော neurotransmitter acetylcholine ကိုဖန်တီးရန်အတွက် choline ကို ဦး နှောက်ထဲသို့လျင်မြန်စွာနှင့်စိတ်ချစွာပေးပို့နိုင်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။
ဒါဟာဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အစွမ်းထက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပြီးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပြည့်အဝအကွာအဝေးတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ဆယ်လူလာကနျြးမာရေးမြှင့်တင်လျက်, brain. အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော neurochemical ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကူညီ
alpha-GPC လျှင်မြန်စွာထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်မှ choline ကယ်တင်နှင့် acetylcholine တစ် biosynthetic ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံးနိုင်ငံများရှိ non-ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FDA က 196.2 မီလီဂရမ် / လူတစ်ဦး / နေ့ထက်မပိုသောစားသုံးမှု GRAS စဉ်းစားသည်ဆုံးဖြတ်သည်။ တချို့ဥရောပတိုင်းပြည်များတွင်, တကဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြု
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (၂၈၃၁-၇၇ မှ ၉) လှုပ်ရှားမှုယန္တရား?
alpha-GPC acetylcholine နှင့် cholinergic လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ထောက်ခံပါတယ်။ : ဒါဟာလည်းကဲ့သို့သောအခြားအဦးနှောက်-အကာအကွယ်သံတမန်တို့အဆင့်ဆင့်မြှင့်စေခြင်းငှါ
Plus အား, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးမြှင့်ပေလိမ့်မည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) ၏
တိုးတက်မှတ်ဉာဏ်နှင့် Enhanced သိမှတ်ခံစားမှု
လေဖြတ် Recovery ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်
အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်, တိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့် Rapid Post ကို-လေ့ကျင့်ခန်း Recovery ကိုတိုးမြှင်
အကြံပြုထားတဲ့ Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) ဆေးတခါသောက်
alpha GPC အလေးချိန်အားဖြင့်အကြောင်းကို 40% choline ဖြစ်ပါတယ်။ Alpha GPC မှုန့်ဒါ 1,000 မီလီဂရမ် choline ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 မီလီဂရမ်ပေးပါသည်။
alpha GPC 250-1,200 တစ်နေ့လျှင် mg ဖြစ်ပါတယ်သိမြင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်သောက်သုံးသောအကြံပြုသည်။ ဤတွင်ဆေးထိုး regimen တစ်ပြိုကွဲမယ့်:
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်: 400 နေ့စဉ်3မီလီဂရမ်, 6X - 12 လ။
လေဖြတ်ပြန်လည်နာလန်ထူ: 1,000 (ဆေးထိုးကဲ့သို့) 1 တစ်လနေ့စဉ် MG ။
400 နောက်မှ3လအတွင်းနေ့စဉ်, နှုတ် 5X MG
အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်: 250 1 တစ်ပတ်နေ့စဉ် MG 
600 1 နေ့စဉ် MG -6ရက်။
အမြင်အာရုံ: 4002လအတွင်းနေ့စဉ်, 2X MG ။
သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများအရ, 400 ထံမှ nootropic သက်ရောက်မှုအပိုင်းအခြားများအတွက်ဆေးထိုးမီလီဂရမ် / နေ့ 1,200 ရန်။ သင့်အနေနိမ့်ဆုံးကိုအပေါ်ကိုစတင်ရန်နှင့်သင့် response. ကိုခြေရာခံဖို့လိုလိမ့်မည်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) အမှုန့် (28319-77-9) ၏
alpha-GPC အမှုန့်အားလုံးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံခဲ့ပါတယ်။ : လူနာတစ်ဦးအစိတ်အပိုင်းမှာ, ကဲ့သို့သောပျော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေ
ခွေးနှင့်ကြွက်များအပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလေ့လာမှုများအတွက်, (3,000 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အထိ) megadoses သာအနည်းငယ်တိရိစ္ဆာန်များ '' လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ။ သုတေသီများ 26 ၏ရေရှည် (150 ရက်သတ္တပတ်) alpha-GCP စားသုံးမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျအဘို့နေ့စဉ် 10 ဂရမ်ကျော်) / ကီလိုဂရမ် MG နိဂုံးချုပ်အဘယ်သူမျှမကျန်းမာရေးအန္တရာယ်သမုတ်သော။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဒေတာ, ကလေးများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမရှိခြင်းကြောင့် alpha- GPC. ရှောင်ရှားရန်လိုပေမည်
ကုန်ကြမ်းခြံဝင်း 7P အမှုန့် (1890208-58-8)
ကုန်ကြမ်းမဂ္ဂနီစီယမ် (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate အမှုန့် (778571-57-6)
ကုန်ကြမ်း NSI-189 အခြေစိုက်စခန်းအမှုန့် (1270138-40-3)
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) အမှုန့် (6384-92-5)